DDoS Ukuhlaselwa - I-Semalt Expert ichaza indlela yokukhusela iseva yakho
Ukhuseleko lweWeb lube ngumcimbi obalulekileyo kwi-webmasters kwiminyaka yamuva. Oku ku fanelekwesoyisongelo lokuhlaselwa okubanjwe ngabaphuli be-cyber. Enye yeengxaki eziphambili kwi-webmaster nganye isasazwa ukulahlwa kweeNkonzo(DDoS).
Umphathi wabaPhumelele kwabaThengi iSemalt ,U-Andrew Dyhan, unika ingqiqo malunga nokuhlaselwa kweDDoS ukukunceda ukuba bayeke abahlaseli ukuba banganciphise umncedisi.
I-DDoS yindlela eqhelekileyo yokuhlaselwa ebusweni be-webmasters - women's casual winter hats. Kwinqanaba elisisiseko, ukuhlaselwaijoliswe ekunciphiseni isayithi lakho, kodwa inokukwazi ukuphazamisa indawo yakho kwaye ukunikezela ukuba ifikeleleke kwiindwendwe - 6RA2113-0BD20-0 SIEMENS.
Kwimeko yokuhlaselwa kwe-DDoS echanekileyo kwisicelo sewebhu, isofthiwe iyafumanabaxhasiwe ngabagculi. Ngenxa yoko, isicelo asikwazi ukuqhuba ngokufanelekileyo iphepha lewebhu elifunekayo.
Ukuxosha umncedisi oqhuba isicelo sokuphazamiseka, ukuhlaselwa kwe-DDoS kujoliswe oku kulandelayo:
Inkqubo yokwenza isicelo ngaphandle
I-pool yolwazi lokuxhamla
Ukuhlaselwa kweDDoS malunga nezicelo zewebhu kubandakanya:
1. Ukuqhagamshela umnxibelelwano wesiseko sedatha ngokudala imibuzo ye-CPU-intensive.
2. Ukuphazamisa inkonzo kumntu okanye kwinkqubo kuquka ukuvimba umsebenzisiukufikelela kwisayithi ngokungenayo ukungena ngemvume okungavumelekanga okubangelwa ukumiswa kwe-akhawunti..
3. Izicelo zewebhu zokukhukula kumgudu wokuyeka ukuhamba kweendlela eziqhelekileyo ukufika kwindawo.
Ukuhlaselwa kwe-DDoS kuye kwaba yindlela yokukhetha kubagculi kuba phantseakunakwenzeka ukukhusela, ukunciphisa ukusetyenziswa nokuchaphazela abasebenzisi abaninzi. Uninzi lwexesha, zonke iimfuno ze-hacker zezifundo zaneleyo izibonelelokunye nesicwangciso esichengeni sokuthatha indawo ngaphandle kokungaxhunyiwe kwi-intanethi.
Ezi zihlaselo zisebenza njani?
Ukuhlaselwa kwe-DDoS kuqala nge-hacker enye okanye abahlaseli abaninzi abenza uchungechungeiinkqubo zebhodi. I-hacker iyalela i-bots nganye ukuqhuba i-traffic kwiziko elithile ngokukhawuleza kwaye ngexesha elifanayo elibeka ngokuqhelekileyouxinzelelo kumncedisi wesiza.
Ukuba iinkqubo zebhodi zinomnatha omkhulu, uxinzelelo kumncedisi lungazisaindawo phantsi. Nangona oku kuhlaselwa akucaci ukuba kufumaneka ulwazi oluthile oluqhathaniswa namanye amacebo okuqhawula, basenayo ingxakiifuthe kwiinkampani ezithembele kakhulu ekufundeni nasekuthengiseni i-intanethi. Ukuhlaselwa kweDDoS kunokuhlawula ibhizinisi ngaphezu kwama-500,000.
Ezi zihlaselo ziyakwazi ukulimaza igama lomkhwa kunye nokunikaingcamango engalunganga kubasebenzisi. Xa senziwa ngabaqhubi bezoshishino, banikezela abaqhankqalazi bakho umgca ngokubenza bakwazi ukuqinisa,uphawu lwezoshishino oluhloniphekileyo oluqhathaniswa nomzobo onokubonakala ungathembekiyo. Kwamanye amaxesha, izigebengu ze-cyber zisongela i-webmasters ukuba iqhubekeukuphazamisa iinkonzo baze bafumane imali ethile.
Ukongeza, idatha efunyenwe kuhlaselo lweDDoS ingasetyenziswe ngabahlaseli ukuba bahlaselelewebhu kwixesha elizayo. Ngokuqhelekileyo, ukuhlaselwa okulandelelanayo kuyimfuneko kwaye kwenzeka xa abahlaseli baqonda ukuba isayithi ikhuselekile kakhuluokwenza kube lula ukujoliswa kwezinto ezinzima kwixesha elizayo.
Nangona ukuhlaselwa kweDDoS kunzima ukukhusela, banokulawulwa basebenzisa i-SiteLockinkqubo yo khu seleko. Iisombululo ezifumaneka kwi-systemLock ye-system yokukhusela ziyakwazi ukuchonga nokugcina ingozi engadingekile eyenziwe nguwebots ukusuka kwindawo yakho ngaphandle kokuphazamiseka kwezithuthi.
Inkqubo ye-SiteLock yoKhuseleko ikhusela amashishini avela kwiindidi ezininzi ezinobungoziukuhlaselwa okubandakanya iintlobo zeentlobo zeentlobo ze-DDoS ukuhlaselwa kusetyenziswa ukukhuselwa kwe-Web Application, iDNS kunye nokukhuselwa kwezibonelelo ezingundoqo.imiba ebalulekileyo yokukhuselwa kweDDoS.